यस्ता रोगीले अदुवा नखानुहोस् ‘बिष’ सरह हुन्छ ! – NepalajaMedia
यस्ता रोगीले अदुवा नखानुहोस् ‘बिष’ सरह हुन्छ !
नेपाली घरमा अत्यन्त कम किचनहरु छन् हाेला जहाँ अदुवा नै नहाेस् । गर्मीमा त्यति नरुचाइए पनि अदुवा त जाडाेमा चियामा पनि हालेर खाइन्छ । चियामात्र हाेइन, अदुवा हालेर जाडाेमा सुप खाँदा पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले पनि अदुवालाई महा‌औषधीसमेत भन्ने गरिएकाे छ ।
अदुवामा भिटामिन सी, क्याल्सियम, फस्फाेरस, आइरन, जिन्क, कपर तथा क्राेमियमजस्ता पाेषक तत्व पनि पाइन्छ ।
यी सात कारणलाई ध्यान दिएर पनि अदुवालाई हामीले हाम्राे दैनिक डाइटमा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ :
अदुवामा ब्याक्टेरिया तथा भाइरससँग लड्ने अद्भुत क्षमता हुन्छ । त्यसैले यसकाे नियमित सेवन गर्दा घाँटीकाे संक्रमण हुनबाट हामी बच्न सक्छाैँ ।
रेडिकल्स नष्ट गर्छ
शरीरमा पैदा हुने फ्रि रेडिकल्सलाई निस्तेज गर्न पनि अदुवाले सहयाेग गर्छ । यस्ता रेडिकल्सले हाम्रा काेशहरुमा नाेक्सान पुर्याउँछन् ।
अदुवाकाे प्रयाेगले हड्डी तथा जाेर्नीहरुमा हुने दुखाइ पनि कम गर्छ । यसमा हुने तत्वले अर्थराइटिस अर्थात् बाथराेगहरुबाट पनि हामीलाई टाढा राख्न सहयाेग गर्छ ।
अदुवाले हाम्राे रगत सफा पनि गर्छ । शरीरमा भएका टक्सिन हटाएर अदुवाले हाम्राे रगत सफा गर्न धेरै नै सहयाेग गर्छ ।
पाचन प्रक्रिया र राेगविरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ
अदुवाकाे प्रयाेगले हाम्राे पाचन प्रक्रिया पनि बलियाे बन्छ । यसले हाम्राे ताैल घटाउन पनि सहयाेग गर्छ । अनि हामीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न पनि सहयाेग गर्छ ।
खाेकी कम लाग्छ
अदुवाले शरीरलाई बलियाे बनाउनुका साथै हामीलाई लाग्ने खाेकीबाट पनि छुट्कारा दिन्छ । सासप्रश्वासलाई राम्राे बनाउन पनि यसले सहयाेग गर्छ ।
अदुवाले हाम्राे रक्तसंचारलाई सुधार गर्ने भएकाले नियमित रुपमा अदुवा खाँदा हामीलाई दुखाइ कम महसुस हुन्छ । त्यसैले बढ्दाे उमेरमा अदुवा खानु अझ राम्राे हुन्छ ।
Prevश्रीमानले ‘सन्तुष्ट’ दिएनन्, पुरूषत्व पनि देखिएन भन्दै यी महिलाले जे गरिन् (भिडियो)
Nextधन कमाउन मलेशिया गएका नेपालीको १८ वटा श’वहरुले विमानस्थलमा रुवाबासी !